Angry Birds Transformers, iray hafa amin'ny voron-dRovio | Vaovao IPhone
Angry Birds Transformers, iray hafa amin'ny voron-dRovio
Eny, efa novakianao tsara ny lohatenin'ilay lahatsoratra, ary tena marina tokoa ny sary izay mitondra azy. Rovio, ilay orinasa izay nanao ny Angry Birds ho lasa gisa volamena, dia manohy manery ny vokatra arak'izay tratry ny heriny, ary vao avy nanambara fiaraha-miasa amin'i Hasbro hanangana lalao izay ny vorona aman-kisoao dia ho lasa Autobots sy Decepticons, ireo robot eny amin'ny habakabaka tonga tety an-tany ary izy ireo no mpiaro ny andian-tsarimihetsika malaza (ary ankehitriny ilay saga sarimihetsika an'i Michael Bay) Transformers. Raha nanandratra ny lohany i Optimus Prime ary nivadika vorona mena ...
Tsy mahalala daty famotsorana izahay, na sary maro hafa noho ireo afisy navoakan'i Rovio tao amin'ny tranonkalany. Tsy misy pikantsary na horonan-tsary, izany hoe, tsy mahalala na inona na inona izahay. Rovio dia nahavita namorona ny fanantenana lavorary ka ny fanombohana ny lalao vaovao dia baomba baomba, toy ny mahazatra, ary fantatsika tsara ny misy antsipiriany vaovao na tranofiara tadiavin'ny orinasa atolotra anay aorian'izay.
Tsy vao sambany i Rovio sy Hasbro no niara-niasa, toa niara-niasa tamin'ny Angry Birds Star Wars ihany koa, vokatra iray hafa an'ny orinasa izay manararaotra ny fisintomana sarimihetsika sarimihetsika hamoronana lalao mahomby, miaraka amina vokatra mpivarotra zato izay manafika ny talantalan'ny fivarotana kilalao, zavatra iray izay tsy isalasalana fa hitranga amin'ireo Angry Birds Transformers ihany koa. Farafaharatsiny mba tsy maintsy ekena fa ny fomba nanarahany ny afisy Transformers tany am-boalohany mba hampiroborobo ny lalao vaovao dia fanomezam-boninahitra ny andiany voalohany. Manantena izahay fa hiatrika vokatra tsara kokoa noho ny Angry Birds Epic na Angry Birds Go aza, lalao roa izay miafara amin'ny maha-monotonous loatra ary mampiseho fa lany ny vokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Angry Birds Transformers, iray hafa amin'ny voron-dRovio
iOS 8 dia mamela antsika hanao antso anaty tarika amin'ny FaceTime
Tsy misy lamandy intsony: ny fampitandremana radar azo antoka ho an'i Espana sy Portugal